Ebe Obibi Shlọ Shkrub pụtara n'ihi ịhụnanya na maka ịhụnanya - di na nwunye na-ahụ n'anya nwere ụmụaka atọ. Ihe DNA nke ulo gunyere ukpuru ukpuru ndi mara mma nke choputara ihe mmetuta na akuko ndi Ukraine. Akụkụ nke ụwa dịka ihe a na-eme ka a na-ahụ onwe ya na akụkụ ụlọ, dị ka ụlọ elu mbụ ahụ dị na ya na ọmarịcha ụrọ ndị e ji ụrọ kpụọ. Enwere ike ịghọta echiche ịkwụ ụgwọ maka ụlọ, dịka ebe ntọala, dị ka eriri na-enweghị atụ na-eduzi.
Fraịdee 17 Septemba 2021
Ebe A Na-Egwu Mmiri Ezigbo Ezinaụlọ Termalija bụ ihe kachasị ọhụrụ na ọtụtụ ọrụ nke Enota wuru na Terme Olimia n'ime afọ iri na ise gara aga ma mechie mgbanwe zuru oke nke ogige ahụ. Site n'ebe dị anya na-ele ya anya, ụdị, agba na ọ̀tụ̀tụ̀ nke ngwakọta ọhụrụ nke tetrahedral mpịakọta bụ ihe na-aga n'ihu ụyọkọ nke ụlọ ndị gbara ime obodo, na-ahụ anya na-abanye n'obi nke ogige ahụ. Rooflọ elu a na-arụ ọrụ dị ka nnukwu ndochi ọkọchị ma anaghị anakwere ohere ọ bụla dị na mpụga.
Ime Ụlọ Eataly Toronto ka ahaziri maka ọdịmma nke obodo anyị na-eto eto, ma ahaziri ya iji mee ka nkwalite mmekọrịta na nkwalite mmekọrịta site na ihe oriri zuru ụwa ọnụ nke nnukwu nri Italiantali. Ọ dabara adaba na “passeggiata ọdịnala” ahụ na-adịgide adịgide bụ ihe mmụọ nsọ na-akwado Eataly Toronto. Ememe a na-adịghị agafe agafe na-ahụ ndị eachtali na mgbede ọ bụla na-aga n'okporo ụzọ na piazza, ịzọ ma na-akpakọrịta ma na-akwụsị mgbe ụfọdụ n'ụlọ mmanya na ụlọ ahịa. Usoro ihe omumu a choro uzo ohuru nke okporo uzo na Bloor na Bay.
Wenezdee 15 Septemba 2021
Uka Bdị bionic nke whale ghọrọ asụsụ ụlọ ụka a. Nnukwu ụgbọ mmiri kpara akpa n'ụsọ oké osimiri Iceland. Mmadu nwere ike tinye ahu ya site na obere azu ma nweta onodu ojoo nke Whale na-elele oke osimiri ebe odi nfe ndi mmadu kariri icheghari na nleghara anya mmebi gburugburu ebe obibi. Ihe owuwu na-akwado ahụ dabara n'ụsọ osimiri iji hụ na obere mmebi na gburugburu ebe obibi. Akụrụngwa ndị eke na gburugburu ebe obibi na-eme ka ọrụ a bụrụ njem nlegharị anya nke na-akpọ maka nchebe gburugburu.
Light Portal N'ọdịnihu Okporo Ígwè Obodo
Tiuzdee 14 Septemba 2021
Light Portal N'ọdịnihu Okporo Ígwè Obodo Light Portal bụ masterplan nke Yibin Highspeed Rail City. Ntughari ndu ezi ihe diri ndi nile n’afo n’aho. Na-esote Yibin High Speed Rail Station nke na-arụ ọrụ kemgbe June 2019, Yibin Greenland Center nwere mkpokọ 160m ogologo agwakọta-ejikọtara ọnụ ejikọtara ọnụ na ihe owuwu ya na mbara igwe ogologo ogologo 1km. Yibin nwere akụkọ ihe mere eme kemgbe ihe karịrị afọ 4000, na-achịkọta amamihe na ọdịnala dịka ọkpụrụkpụ mmiri n’osimiri bụ akara mmepe nke Yibin. Tlọ Ejima Abụọ na-arụ ọrụ dị ka obere ụzọ iji duzie ndị ọbịa nakwa akara ngosi nke ndị bi na ya ga-ezukọ.
Ulo Ogwu Ulo
Mọnde 13 Septemba 2021
Ulo Ogwu Ulo Clinique ii bụ ụlọ ọgwụ orthodontic dị iche iche maka onye isi na onye na-ahụ maka echiche na-etinye ma na-eme nyocha na nyocha na akụrụngwa na akụrụngwa kachasị elu na ọzụzụ ya. Ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ ahụ chepụtara echiche nke itinye ihe na-adabere na orthodontic na-ejikarị ụdị ọgwụ ọgwụ dị elu dị ka ụkpụrụ imewe na mbara ahụ. Gburugburu mgbidi ụlọ na arịa ụlọ jikọtara n'ụzọ na-enweghị mkpụmkpụ n'ime sọlfọ na-acha ọcha na-agbaze ọnya na-acha odo odo ebe a na-etinye nkà na ụzụ ahụike dị egwu.
Ebe Obibi Ebe A Na-Egwu Mmiri Ime Ụlọ Uka Light Portal N'ọdịnihu Okporo Ígwè Obodo Ulo Ogwu Ulo